UJames Marsters - oku akuyona inkwenkwezi enkulu yaseHollywood kwaye ayikho umxholo ophezulu we-blockbusters. Kodwa isizukulwana sonke siyazi kwaye siyayithanda. Emva koko, i-biography kaYakobi inomxholo onjengeengqungquthela ethi "Buffy the Vampire Slayer". Kubulela kuye ukuba i-biography yama-Marsters isoloko inomdla kubabaninzi nabaninzi. Phantse onke amantombazana ehlabathini lonke amthanda ubuhle be-pergid, oye wahamba esuka kwivampire engathandekiyo kumntu onothando-ntliziyo owayekulungele ukwenza nantoni na othandekayo. Kwaze kwaba sekufeni. Inxaxheba yeSpike yinto into uJames ayayiqonda ngayo ihlabathi lonke. Nangona akazange afune ukwenza oku. Enyanisweni, uJames Marsters, ochazwa ngaye ngomntu ophilayo, ongekho imali, akazange afune ukuba yinkwenkwezi enkulu. Wayefuna nje ukuba ngumdlali wangempela kwaye ujonge oko akwenzayo.
UJames Marsters, owaziwa ngaye ngo-Agasti 20, 1962, wazalwa edolobheni laseGreenville, eCalifornia. Ngoko uYakobi, kunye nonina, uyise, umzalwana nodadewabo bathuthela kwisixeko saseModesto. Apho waza wadlula umntwana wale nkwenkwe. Amantombazana amancinci ayengamahloni kwaye anamahloni. Kuphela kwinqanaba lezemidlalo wayebonakaliswe ngokupheleleyo. Kwaye kwintlalontle, uJames wadlala ukususela ebuntwaneni. Imveliso yokuqala, apho uYakobi wayithatha inxaxheba, yayingumxholo wesifundo ngoWinnie the Pooh. Wayeyidlala indima ye-esile uEeyore. Emva koko, iiMarsters zenze ukuba uya kuba ngumdlali kunye nomdlali. Ubomi bakhe buxelela ukuba uYakobi wadlala kwimveliso emininzi kwiminyaka yakhe yesikolo. Ngendlela, kwakusezantsi kwinqanaba lokuba umfana wokuqala wamanga intombazana. Kwenzeke eneminyaka elishumi elinesine. Emva kokugqiba, uYakobi wagqiba ekubeni aqhubeke efunda kwi-Conservatory yasePacific yokusebenza. I-biography yakhe ithi apho wafunda ngo-1980 ukuya ku-1982. UYakobi ukholelwa ukuba ngeli xesha wayefundiswa yonke into eyayimfuneko ukuyazi ukuze abe ngumdlali omhle. Wayebulela ngokuphindaphindiweyo ootitshala bakhe ngentliziyo yakhe yonke yokuba babekwazi ukutshala imali kuye, kwaye, ngokubalulekayo, bafundiswa ngokweStanislavsky. Le nkqubo ibonisa ukuba umntu ujongene ngokupheleleyo nendima. Uvakalelwa ngumlingiswa wakhe, ucinga njengokuba wenzayo kwaye usebenza naye ngexesha lomdlalo kwimidlalo okanye kwiisethi.
Emva kokugqitywa kwi-conservatory, uYakobi uhamba waya eNew York kwaye uyaqhubeka nokuqhuba izifundo zakhe kwiJuardard Conservatory ehloniphekileyo. Kodwa, akayimi apho kwiminyaka emibini. Njengoko uYakobi ngokwakhe uthe, bafundiswa khona iimbono zokwenza, kodwa babengavumelekanga ukuba bazenze, bazama, kunye nokunye okunjalo. Yaye yintoni kanye uYakobi ayifunayo. Ukongezelela, wayexinzelelekanga kungekhona kuphela ootitshala, kodwa kunye nesakhiwo ngokwawo. Kumgangatho wokugqibela wawubeka i-violins yaseStradivarius, eyayidinga ukushisa okuthe ngqo kunye nemozulu. Ngenxa yoko, isakhiwo sasivumba. Oku, ngokukaYakobi, kwakungumnandi weentlungu.
Ngako oko, lo mfana waphonsa izifundo zakhe, waqala ukuzama ukwenza ubomi. Ngethuba elithile wayehlala kude neyona ndawo efanelekileyo eNew York - Queens, apho wayesebenze khona ixesha elithile njengomlungiseleli, ngoko njengomphathi kwindawo yokutyela. Kwakuloo xesha wayifumana isiqhekeza phezu kweshiya lakhe lesobunxele - enye yezinto ezibonakalayo zokubonakala kweSpike. Ngenye ilanga, xa umfana ebuyela emsebenzini, wahlaselwa ngamagundane. Ngaloo xesha uYakobi wayethanda ukusela kwaye wayengekho ngendlela engcono kakhulu yobomi de wafudukela e-Chicago. Wayeqonda ukuba wayedinga indawo yokudlala, mhlawumbi wayeza kulala phantsi. Kwakukho apho iiMarsters zadibana nabantu abafuna ukuzama esiteji. Bakha iqela labo kunye nenxaxheba yokuqala kaYakobi yaba yinxaxheba kaFerdinando esuka eShakespeare's "Storm". Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le midlalo yayiyilingo, kuba kwimoya enye uJames wayethathwa kubaphulaphuli beze, eboshwe kwivili, njengoko yayifanekisela indoda efanelekileyo uDa Vinci. Kwakukho apho wadibana nomkakhe uLiana Davidson. UJames wayemthanda kakhulu, njengonyana kaSullivan. Kwaye ixesha elide wayengazi ukuba wayemngcatsha. Njengoko uYakobi wathetha, wayehlala ekholelwa ukuba ubudlelwane abukwazi ukwakhiwa ngesondo esinye, kufuneka kube nenkxaso, ukunyaniseka kunye nokuqonda. Ngoko ke, emva nje kokuzalwa kukaSullivan, waqhawula umfazi wakhe. Kodwa ke, andizange ndilibale ngonyana wam. Ngokuphambene noko, nguYakobi waya eLos Angeles. Imali eyayifumana kwi-theatre yayingonelanga ukunceda intsapho. Ngoko ke, uYakobi wagqiba ukuzama ukuthengisa, nangona kwakungekho kwimigaqo yakhe yobomi. Yileyo ndlela ayenayo kwi-set "ye-Buffy". Njengoko sonke sisazi, i-Spike kwafuneka ibe yindawo yokuhlambalaza ngexesha elilodwa, kwaye yaba yindoda yechungechunge lonke. UYakobi ukhumbula ngokuvuya ukudubula. Uthi bahlala beyintsapho. Kwaye nentsapho, le nto ibaluleke kakhulu ebomini, nokuba yintoni, ihlala yintsapho yakho. Yaye ukuba uyayinqaba intsapho yakho, uyaziyeka.
Ngokubanzi, uYakobi uyindoda enobulumko. Ufunda kakhulu, unomdla kwezobugcisa kwaye akaze azibeke ngaphezu kwamanye. Kanti akafuni ukuxoxa nabantu abenaye. Ngokukodwa abafazi. Yena, njengoSpike wakhe, ungumntu ongokoqobo waseNgilani, nangona engumntu waseMelika oyinyaniso. Nangona kunjalo, uzinikezele kwaye unothando. Mhlawumbi ngenxa yoko, emva kokuqhawula umfazi wakhe, uYakobi ixesha elide wafumana intlungu yomphefumlo, akazange ahlangane nabani na okanye iireveli zakhe azizange zihlale ixesha elide. Kodwa, ekugqibeleni, kwelinye lamakhonsathi eqela lakhe "I-Ghost of Robot" uJames wadibana noPatricia. Le ntombazana yayingumfana wayo, kwaye emva kwonyaka weneminyaka emine, ngoJanuwari 14 kulo nyaka waba ngumfazi. Ngoku uYakobi uyavuya ngokwenene. Ngamanye amaxesha uhamba, uphinde udlala kwiqela elithi "The Ghost of Robot", ngoku unyana wakhe, kuba ngoMeyi loo mfana wayeneminyaka elishumi elinesihlanu. Kwakhona uYakobi wavakalisa iincwadi ezininzi ngeJim Butcher malunga neentlanga zomlindi-umculi u-Harry Dresden.
UJames Marsters akazange afune ukuqonda umhlaba. Mhlawumbi yeso sizathu sokuba ndifumene. Emva kokuphela kwe "Buffy" iminyaka eyisibhozo idlule, kodwa uyakhunjulwa kwaye uyathandwa. Bathanda impawu zakhe, iimvakalelo, ukuhleka, kunye nobuhle nobulumko. UYakobi - lo ngumntu omele afunde ukuba ngumntu wokwenene.
I-Vampire Diaries, u-Ian Somerhalder
UDavid Gandhi - umzekelo odumile waseBritani
UFilipu Kirkorov uya kuhola "i-Eurovision-2009"
Imincintiswano yeqela le-bachelorette
Inti yeMint eMorocco
Isaladi evela kwiitamatati kunye noshizi
Uhambo olulungileyo lwaseNew York
I-cheesecake ye-Lemon ngaphandle kokubhaka
I-chocolate yiproleta e-chileyile
Yintoni i-hyperplasia kwaye yintoni na iindidi zayo?
Kuthekani ukuba umyeni wam ushintshile?